Eyona KITS ye-aquarium efanelekileyo yabaqalayo, yeyiphi oyikhethileyo? | Ngeentlanzi
Gcwalisa iikiti ze-aquarium ezifanelekileyo ukuqala ngazo, oko kukuthi, kubalandeli behlabathi leentlanzi kunye neendawo zasemanzini abafuna ukuqala ukuba ne-aquarium yabo. Ngexabiso elifanelekileyo, iikiti zibandakanya uluhlu lwezinto eziza kwenza ubomi bakho bube lula kwaye ziya kuvula indlela yakho yokufumana i-aquarium efanelekileyo.
Kweli nqaku kwi-aquarium epheleleyo siza kubona ukuba zijolise kubani ezi aquariums, zeziphi izinto abaqhele ukuzibandakanya kunye neentlobo zazo ezahlukeneyo, phakathi kwabanye. Ukongeza, sikwacebisa ukuba ufunde elinye inqaku malunga Ithemometha ye-aquarium, Enye into eluncedo kakhulu (kunye nexabiso eliphantsi) ukuqinisekisa ukuba iintlanzi zakho zisempilweni.
1 Ezona khithi ze-aquarium zibalaseleyo ukuqala ngazo
2 Ngoobani iikiti ze-aquarium ezipheleleyo ezenzelwe zona?
3 Yintoni ekufuneka ibe nayo kwikhithi ye-aquarium
3.1 lokucoca ulwelo
3.2 Izibane ze-LED
3.3 Isifudumezi samanzi
4 Iindidi zeekiti ze-aquarium
5 Indlela yokubala ukuba zingaphi iintlanzi ezinokulingana kwi-aquarium
5.1 Ubungakanani beentlanzi
5.2 Intlanzi ngesondo
5.3 Izityalo kunye nezixhobo
6 Uyithengela phi ikiti epheleleyo ye-aquarium kwintengiso
Ezona khithi ze-aquarium zibalaseleyo ukuqala ngazo
I-RADYS Aquarium PECERA 19 ...
I-RADYS Aquarium PECERA 35 ...
I-Tetra Starter Line ye-LED ...
Ukufunyanwa kweTetra AquaArt ...
I-RADYS Aquarium PECERA 12,5 ...
Ngoobani iikiti ze-aquarium ezipheleleyo ezenzelwe zona?
Gcwalisa iikiti ze-aquarium zilungele ukuqala, yiyo loo nto zijolise ngokukodwa kwabo bathandi beentlanzi bangekho kudala. Kwaye bafuna imveliso ebandakanya zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze baqalise.
Njengoko siza kubona ngezantsi, iikiti zihlala zibandakanya uthotho lwezinto ezisisisekoNangona, ngokuxhomekeke kumgangatho (kunye nexabiso) le-aquarium, ezi zixhobo zingasisiseko kwaye zilula okanye zibandakanye enye into, njengokuhombisa, ifanitshala ...
Into emnandi ngokukhetha ikiti xa uqala kule nto intsha kunye nenomdla kukuba asizukufumana iziseko zokuqala kuphela, kodwa ngokuhamba kwexesha sinokukhetha ukuphucula ezo zinto sizikhethayo kwi-aquarium yethu ngaphandle kokwenza utyalomali oluphezulu kwezoqoqosho.
Yintoni ekufuneka ibe nayo kwikhithi ye-aquarium
Iikiti ze-Aquarium zingabandakanya izinto ezininzi, kodwa Esona sisiseko (kwaye into ekufuneka uyilumkele ikumgangatho ongcono) koku kulandelayo:
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-aquarium (ngaphandle kwentlanzi, kunjalo) sisihluzo. Ukuthetha ngokubanzi, yile nto yahlula i-aquarium kwiitanki zentlanzi, kuba kwezi kufuneka uwaguqule ngokupheleleyo amanzi, ngelixa Icebo lokucoca ulwelo linoxanduva lokuyicoca ukuze uyibuyisele icocekile kwi-aquarium. Ukwenza oku kusetyenziswa, ukongeza koomatshini, izinto ezifana nefayibha yekhokhonathi, ikhabhon okanye iperon, into efana nekotoni esithethe ngayo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Amacebo okucoca ziindidi ezimbiniIzinto zangaphakathi, ezisetyenziselwa ukuntywiliselwa ngaphakathi kwi-aquarium, kubonisiwe kwi-aquariums ezincinci okanye eziphakathi, kunye nezo zangaphandle, kubonisiwe kwi-aquariums ezinkulu.
Kwixesha elidlulileyo, ukukhanyiswa kwee-aquariums kwakusenziwa ngezibane zentsimbi, nangona kunjalo Okwexesha elithile ngoku, uninzi ngakumbi lukhethwe kwii-LEDAyisiyiyo kuphela ngoba ipholile, yenza ukukhanya kwemibala emininzi kwaye ijongeka intle, kodwa nangenxa yokuba inamandla ngakumbi kwaye ivelisa ubushushu obuncinci, into leyo iintlanzi zakho eziyakuxabisa.
Ngokomgaqo, izibane ziyinto yobuhle kwi-aquarium yakho, nangona unezityalo (oko kukuthi, i-aquarium etyaliweyo) izinto ziyatshintsha, kuba ukukhanya kuyimfuneko kwizityalo ukuze zifotosinthesize.
Ezona khithi zigqibeleleyo ze-aquarium zibandakanya isifudumezi samanzi, isixhobo esihlala ngokuhambelana negama laso inoxanduva lokufudumeza amanzi kubushushu obufunayo (Kwezona zilula kuya kufuneka ujonge iqondo lobushushu ngesandla, ngesixhobo sokulinganisa ubushushu, ngelixa esona sigqibeleleyo sibandakanya isivamvo esenza sisebenze isifudumezi ngokuzenzekelayo). Iiheater ziluncedo ngakumbi ukuba uhlala kwiindawo ezibandayo okanye ukuba une-aquarium yentlanzi yetropiki.
Iindidi zeekiti ze-aquarium
Xa uthenga ikhithi ye-aquarium, mhlawumbi umbuzo wokuqala oza engqondweni kukuba zingaphi iintlanzi esinokuba nazo kwi-aquarium, umbuzo onzima ngakumbi kunokuba ubonakala (kwicandelo elilandelayo siza kuzama ukuwuphendula ngokufutshane). Ukulandela nge iintlobo zeekiti, eziqhelekileyo Zizo zilandelayo:
Eyona aquarium incinci kuzo zonke, ihlala inendawo eyaneleyo yeentlanzi ezimbalwa kunye nezinye izityalo. Zintle kakhulu, kuba zihlala zineempawu zokubonisa. Njengokuba umthamo wamanzi emncinci kakhulu, izixhobo (ngokusisiseko impompo kunye nefilitha) zihlala zidityaniswa kwi-aquarium, yiyo loo nto ithatha indawo encinci.
I-aquarium enkudlwana, nangona kunjalo ikuluhlu oluncinci oluphakathi. Ukufumana inani leentlanzi onokuzifaka, kuya kufuneka ubale ukuba zingaphi izityalo, igrabile kunye nezinto zokuhombisa oza kuzisebenzisa, kunye nobungakanani beentlanzi xa sele zikhulile. Ngokwesiqhelo ukubala ku malunga neentlanzi ezi-5, nangona ubalo lunokwahluka ngokuxhomekeka kubungakanani bentlanzi. Ukuba azikho zinkulu kakhulu, ezi ndawo zasemanzini zibandakanya isihluzi, kunye nezinye izinto ngaphakathi, ngaphakathi.
Ngaphakathi kuluhlu lwama-aquariums aphakathi sifumana ezo zeelitha ezingama-60, enyanisweni zezona zikhetho zibalaseleyo zokuqalisa. Ii-aquariums ezincinci kunye nezinkulu kunzima ukuzilawula, ngokuchanekileyo ngenxa yobungakanani bazo, kwelinye icala, ilitha engama-60 inexabiso elifanelekileyo ukuqala ngalo, kuba alikho likhulu kakhulu okanye lincinci kakhulu. Ezi aquariums zihlala zibamba malunga ne-8 yeentlanzi.
Kukho ezinye iindlela ezipholileyo kakhulu onokukhetha kuzo faka yonke into oyifunayo. Njengakwimeko yeelwandle ezincinci, zihlala zifika sele zifakiwe kwi-aquarium. Ezinye zibandakanya ukukhanya kwemini nobusuku ukuze ubonelele ngokukhanya okufanelekileyo kwintlanzi nakwizityalo zakho.
Ubungakanani obukhulu kakhulu, apho malunga neentlanzi ezili-12 zinokulingana, nangona, njengesiqhelo, kuya kuxhomekeka kubungakanani bezilwanyana, indawo ekuhlala kuyo izixhobo ... Ezi ndawo zasemanzini azisajolisanga kwabaqalayo, kodwa zijolise kwabo baqalisiweyo. Izixhobo, ezinjengecebo lokucoca ulwelo, azisekho kwaye ngamanye amaxesha zangaphandle, uphawu olutsha lokuba alufumaneki kuwo wonke umntu.
BETTASHOP.ES AQUARIUMS ...
I-Aquariums enefanitshala, Ukongeza ekubeni yenye yezona zibiza kakhulu kuluhlu, zibandakanya ifenitshala ehlengahlengiswe kwimilinganiselo ye-aquarium. Eyona nto inomdla kwezi modeli kukuba kwifenitshala unokufumana zonke izinto ozifunayo, ukongeza, kukho ezo zibandakanya inkqubo yokugcwala okungxamisekileyo nayo yonke into. Ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona ndlela intle kunye neyona nto intle yokwenza i-aquarium yakho.
I-Marina-Ikhithi ye-Aquarium ...
Amanzi olwandle Zezona zinzima ukugcina, kuba iintlanzi ezibuthathaka kakhulu kwaye kufuneka ube namanzi azinzile, okanye yonke i-ecosystem inokuphazamiseka. Ukanti zezona zintle kwaye zinomtsalane. Oko kwathethi, zikhona iikiti zaselwandle ze-aquarium ezikunika izixhobo zokuqala oza kuzidinga ukuzidibanisa, ezinje ngenkqubo yokuhluza kunye nokufiphala kwangaphambili.
Ezona ndawo zinexabiso eliphantsi zamanzi zinezinto ezimbini ezifanayo: banomthamo omncinci wamanzi kwaye ngamanzi acocekileyo. Ukuba awufuni ukubenza nzima ubomi bakho kakhulu kwaye uza kuba neentlanzi ezimbalwa, sisisombululo esifanelekileyo. Kufuneka uqiniseke ukuba banenkqubo elungileyo yokuhluza kwaye ubagcina becocekile. Ewe, ukuba i-bug ikulume kwaye ufuna ukuthenga iintlanzi ezininzi, uya kufuna i-aquarium enkulu.
Indlela yokubala ukuba zingaphi iintlanzi ezinokulingana kwi-aquarium
Xa ubala zingaphi iintlanzi ezinokulingana kwi-aquarium yakho, umgaqo oqhelekileyo kukuba isentimitha enye yentlanzi ilingana nelitha nganye yamanzi. Kungenxa yoko le nto kuya kufuneka wenze uthotho lokubala ngokusekwe koku kulandelayo:
Ngokwendalo, ubungakanani bentlanzi yinto yokuqala ekufuneka uyithathele ingqalelo xa ubala ukuba zingaphi na ezinokulingana kwi-aquarium. Soloko ubala ususela kubungakanani babantu abadala iintlanzi ezizakufikelela (amaxesha amaninzi, xa uzithenga, zisencinci kwaye azikagqibi ukukhula. Kananjalo, kuxhomekeke kuhlobo lwamanzi uzokwazi ukubeka iintlanzi ezininzi okanye ezimbalwa. Umzekelo, kwi-aquarium yolwandle isixa ilitha enye yamanzi kwisentimitha nganye imilinganiselo yentlanzi, ngelixa amanzi amatsha esiqingatha, iisentimitha ezi-0,5 kwilitha nganye yamanzi.
Isizathu silula: ukuba uneentlanzi ezingamadoda nezibhinqileyo, kwaye uzishiya kwintando yazo, ziya kuzala kwakhona, ngexeshana elincinci uza kuba ne-aquarium ukuya esiphelweni. Iintlanzi ezininzi kakhulu zingakhokelela kungekuphela kwigumbi elincinci lokuqubha, ezinokuthi zikhokelele kwimilo yendawo, kodwa kunye nokwanda kwenkunkuma (enjenge-poop) engenakucocwa ngesihluzi, esinokuchaphazela umgangatho wamanzi kwaye, ngenxa yoko, impilo yentlanzi yakho.
Izityalo kunye nezixhobo
Ekugqibeleni, izityalo kunye nezinto ezincedisayo (ezinje ngemifanekiso eqingqiweyo) oza kuyibeka kwi-aquarium nayo idlala into xa ubala ukuba zingaphi iintlanzi ezinokulingana kwi-aquarium yakho, kuba ziya kuthatha indawo (zishiya indawo encinci yokuqubha) kwaye zinokuvelisa inkunkuma (ubuncinci bezityalo eziphilayo). Kuyafana negrabile emazantsi, kuya kufuneka ubale ukuba ngaba bahlala kangakanani umthamo wokugqibela wokubala.
Uyithengela phi ikiti epheleleyo ye-aquarium kwintengiso
Unokufumana izixhobo ezipheleleyo ze-aquarium, xa kuthengiswa okanye kungenjalo, kwiindawo ezimbalwa. Ezona zixhaphakileyo nezicetyiswayo zezi zilandelayo:
AmazonNgenxa yenani lee-aquariums ezahlukeneyo kunye namaxabiso, kusenokwenzeka ukuba unokukhetha. Ukongeza, into ekufuneka igcinwe engqondweni kukuba inenkqubo yothutho elungileyo, ngakumbi ukuba unekhontrakthi ye-Prime khetho, ke uya kuba ne-aquarium ekhaya phantse kungabikho xesha.
En iivenkile zesebe ezifana neCarrefour Kukwakho nezinye iindlela ezinomdla, nangona kungenjalo ngokwahluka kwezinye iindawo. Ukufumana esona sipho silungileyo, hlala ubukele kwiwebhu, kuba kukho iindlela ezinomdla kakhulu kwi-Intanethi kunye nezona ziphuculo zilungileyo.
Ekugqibeleni ungene iivenkile ezizodwa zezilwanyana zasekhaya NjengoKiwoko uzakufumana uninzi lwee-aquariums ezahlukeneyo. Kuyacetyiswa ukuba undwendwele ivenkile ebonakalayo ukuba uthenga i-aquarium okokuqala ngqa, kuba abathengisi babo banokukunceda kakhulu ukuba unemibuzo efuna iimpendulo.
Izixhobo ezipheleleyo ze-aquarium zilungele ukuqala ngokuba zinezixhobo ezifanelekileyo zokuhlanganisa isiqwenga somlambo (okanye ulwandle). Siyathemba ukuba eli nqaku liluncedo kuwe. Sitshele, sowuyithengile nayiphi na ikhithi oza kuyiqala okanye uqale ngayo ukuyirhabaxa? Ubungakanani kunye neentlobo ocebisayo? Athini amava akho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » I-aquarium epheleleyo